♫♥✿မြန်မာပြည်ကို ချစ်ပါလျှင် ♫♥✿ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ♫♥✿မြန်မာပြည်ကို ချစ်ပါလျှင် ♫♥✿
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Dec 23, 2012 in News | 18 comments
မှုခင်းသတင်းလေးတစ်ခုကြားပြီးကတည်းက ရင်ထဲတော်တော်လေးမကောင်းတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ ကို ရင်ဖွင့်တာပါ…
ပါတယ်..တိုင်တဲ့သူက ဘာလို့ တိုင်ရလည်းဆိုတော့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံ
ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုး သိက္ခာကျမှာ မလိုလားလို့ ပါတဲ့..သူတို
နောက်တစ်မှုကတော့ အိမ်ဖော်လုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် သူ့ ချစ်သူ နဲ
့ပေါင်းပြီး အိမ်ရှင်အပျိုကြီး.ဖြစ်တဲ့ ရဲမေကို သတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေခိုး
နောက်အမှူကတော့ ကရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါး အသက်က ၃၅
အဲ့ဒီလိုနေတာကြာတော့ မိန်းမပျက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးသွားလို့ 
သင်္ကန်းတောင်မချွတ်တော့ပါဘူး..ညဘက် တောင် ထွက်ပြီး
မိန်းမပျက်ကလည်း ၀န်ခံပါတယ်။။ အဲ့ဒီနောက် ရဲက
အချောင်ဘုန်းကြီးကို ဖမ်းတာ ကူညီ
ပေးဖို့ ပေါ့၊၊ မိန်းမပျက် နေတဲ့ အိမ်မှာ ရဲတွေက လျှို့ ဝှက်ကင်မရာ
တပ်ထားပါတယ်..ညဘက် ဘုန်းကြီးရောက်ပြီး အိမ်ထဲကို ၀င် ပြီး မိန်းမပျက်နဲ
ကိုယ့် အမိနိုင်ငံတော် ဂုဏ်မညှိုးအေင် ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သိက္ခာကို
အပျက်မခံပါနဲ့ လား..မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ သူခိုးမျိုး..၊
ကိုယ့်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာလူမျိုး သူများအထင်သေးတာမဖြစ်ပါစေနဲ
့..ကိုယ့်အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စည်းစိမ်တွေပုံပြီး ပေးကမ်းမှ စောင့်ရှောက်
ကာကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး…ကိုယ့်၇ဲ့ ကိုယ့်ကျင့်တရားနဲ့ အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုး၇ှိအောင်နေရင်ပဲ..လုံလောက်ပါပြီ..
***သူခိုးမျိုးဟေ့…တို့ ဗမာ.***…***လူလိမ်မျိုးဟေ့ တို့ ဗမာ***… *** _ါသည်မျိုးဟေ့ တို့ ဗမာ *** မဟုတ်ပါဘူးနော်…
***ငါးခုတ်မတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုတ် ***တယ် ဆိုတဲ့ စကားဟာ
လူတွေရဲ့ ဝါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းတဲ့ အတွေးကြောင့်လား..မသန့် ရှင်းတဲ့
ကိုယ့်တစ်ကောင်ကြောင့် အများပါ ပုတ်မယ်ဆိုတာ မတွေးမိလို့ လားဟင်..:(
တစ်ခုလောက်တာ့ မေးချင်တယ်ဗျ အပေါ်က ဂီတ အမှတ်အသားလေးတွေ
အသဲးပုံလေးတွေက ဘယ်ခလုပ်ကိုနှိပ်ရင် ပေါ်တာလဲးဗျ ကျုပ်မလုပ်တတ်လို့ပါဗျာ။
အသဲပုံက အခုချမ်းချမ်းတင်ထားတာကို ကူးပြီးသိမ်းထားပါ..ခေါင်းစဉ်တပ်ရင် ထည့်လိုက်ရုံပဲလေ..ချမ်းချမ်းလဲ သူများဆီက ဒီလိုပဲ ကူးထားတာပါ..:D
အရင် ချမ်းချမ်းစာလေးတွေ ကောင်းလွန်းလို့ ပရင့်ထုတ်ပြီးတောင် ဖတ်ခိုင်းရတယ်။
သူများတိုင်းပြည်ရောက်နေတော့ အကျင့်မကောင်းတဲ့သူတွေက ပိုသိသာနေသလားလို့။
ပြည်တွင်းမှာလည်း အဲလိုလူတွေ တပုံကြီးပါပဲ။
padonmar ရေ ချမ်းချမ်းက စာရေးဆရာမတော့မဟုတ်ပါဘူး…ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့ တာလေးတွေကို သင်ခန်းစာအနေနဲ့ ရေးတာပါ..ချမ်းချမ်းကပေါက်တိကပေါက်ချာရေးထားတာကို ပရင့်ထုတ်ပြီးတောင် ဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးလဲအရမ်းတင်ပါတယ်..:D.
မြန်မာတွေဟာ.. ယူအက်စ်ရောက်ရောက်.. ဥရောပရောက်ရောက်.. ဂျပန်ရောက်ရောက်.. ထိုင်းရောက်ရောက်.. မလေးရောက်ရောက်.. စင်္ကာပူရောက်ရောက်..
မြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်း.. ကိုလိုနီခေတ်..။ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ခေတ်..။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်..။ စစ်အစိုးရခေတ်.. အတူတူပါပဲ.
ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုမရှာကြတာမဟုတ်..။ ရှာကြတဲ့သူတွေကို.. ရှာခွင့်တောင်မပြုနိုင်ကြတဲ့အခြေအနေပါ..။ အခွင့်အလန်းရဖို့.. ၂ဆင့်ပိတ်နေပါတယ်.။
အလုပ်မှာတောင် တခုခုဆိုမြန်မာတမျိုးလုံးနဲ့ချီပြောခံရမှာစိုးလို့ အလုပ်ချိန်ကိုကြိုရောက်အောင်သွား ကြိုးစားပြီးနားလည်အောင်လုပ်
မသိတာတွေအိမ်သယ်ပြီးစဉ်းစား သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင် အဲလိုလေးတွေလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ် တိုင်းတပါးမှာ ကိုယ့်အပြုအမူတွေက မြန်မာဆိုတာနဲ့ အမြဲယှဉ်တွဲနေတာမို့ အစစအရာရာသတိထားပါတယ်။ တွေ့ဖူးတဲ့တော်တော်များများကလည်း အခုလိုပဲမြန်မာစိတ်ဓါတ်ကို အထင်မသေးရအောင် နေကြပါတယ်။
အခုလိုမျိုးပို့စ်ထဲကလူမျိုးတွေအကြောင်းကြားရတော့လည်း စိတ်လေပါတယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။
င်ငံရပ်ခြားရောက်ရင် ကိုယ့်လုပ်ရပ်ဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်စားပြုသလို ဖြစ်နေတော့…………..
အရင်က ကိုယ့်ဆီမှာနေတုန်းက ပေါ့ပျက်ပျက် အလေးအနက် မထားတတ်သူကတောင် နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်တဲ့အခါ မခံချင်စိတ်နဲ့ ပိုကြိုးစားပြီး ပိုတော်ပိုတတ်သွားတာမျိုးလည်း တွေ့ဖူးတယ်။ :hee:
လူနေမှုဘ၀နိမ့်ကျတာနဲ့အမျှ အတော်များများကအမူအကျင့်ပြောင်းလဲကုန်ရာက အကျင့်ပါကုန်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုဘ၀နိမ့်ကျတဲ့လူများစွာရှိတဲ့နိုင်ငံကလူတွေအပေါ် မြန်မာတွေရဲ့အကျင့်ကဘယ်လို ဆိုတာကတော့ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့သိမ်းရမ်းလိုက်သလိုပါပဲ။
ဓလေ့အကျင့်..စရိုက်ဆိုတာတွေက.. (တည့်တည့်ပြောရရင်..) ဘာသာရေးကလာတာပါပဲ…
မြန်မာဟာ.. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်.. နောက်ကတွက်ရင်.. ၁ကနေ ၁၀ထဲအများးးးးးးးးးးးးကြီးပါနေသေးတယ်…။ပါဆဲ..ပါလတံ့တွေအများကြီးမြင်နေရတယ်..။
ဒါတွေကို..အပြုသဘောနဲ့.. ထောက်ပြပြောဆို.. ပြင်ဆင်ကြစေဖို့အဓိကပါ..။
အတွေးအခေါ်.. ဘာသာရေး.. လက်ရှိ”ဟာ”တွေလွှတ်ချ.. ယူတန်း U-turn တန်းကြဖို့အချိန်အခါ..သင့်လွန်းမကသင့်နေပြီဆိုတာ.. ပြောလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်..။
မြန်မာတွေရဲ့.. ကောင်းတာတွေရွေးပြောလည်း..” ပြောမဆုံးပေါင်..တောတသောင်း” ရှိတာပါပဲ..
ဦးသိန်းစိန်ကို အပုပ်ချကြ..။.. ဒေါ်စုကို.. ဆုံးမလမ်းညွှန်ကြ..။
ဘင်္ဂလီတွေကိုမုန်းတီးသတ်ဖြတ်ပြကြ.. ။ ကုလားတွေမုန်းပြကြ..။ ဗုဒ္ဓဘာသာကာကွယ်ကြ..။
.. တကယ့်အချက်အလက်တွေတော့.. (မြှောက်ပြောပြောပြီး) လစ်လှူရှုမပြနိုင်ပါဘူး..
သခင်မျိုးဟေ့.. ဒို့ဘားမန်း(Burman) :harr:
( တောင်ငူနန်းသူမမကို ကိုက်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ပါနော..
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့.. ပြောချင်တာကို.. တွန်းပြောပြောလိုက်တာသာဖြစ်ကြောင်း.. )
သဂျီးဦးခိုင် စက်ဘီး လေထိုးကျွတ်ဖာ ကုမ္မဏီလိမီတက်မှ ယူအက်စ်လေ အစစ်ဖြင့် ထိုးပေးနေပါသည်။ ပြည်တွင်းဖြစ်အားလုံး မစွံ၍ တကယ်ပြင်လိုလျင် ဦးခိုင်လေ သုံးမှဖြစ်မည်။ ဖူး ဖူး.. :harr:
ငယ်ငယ်ကျောင်းသားဘ၀က. သုံးခဲ့တဲ့.. .ပြည်တွင်းဖြစ် ဒန်ထမင်းဘူးများ.. နာမယ်က..ဦးစ(USA) တဲ့..။
Myanmar ကလာတယ် လူမျိုးက Burman အဲ့လိုပြောလည်း ရမယ်ထင်တယ်နော်
ဘာမှ မဟုတ်ဖူး Burman မြင်လို့ ၀င်ပြောတာ။
သူကြီးလေသံတွေနဲ့ မားသားကြီးကို သွားကလိတာ
စိတ်မထင်ရင် ကောက်ကောက်ထုတာ ထွက်ပြေးရတာ ခလုပ်ကို တိုက်လို့ ဟီး
ကျုပ်အနေနဲ့ ရွာသူလေးချမ်းချမ်းကို အင်တာဗျူးချင်မိတာလေးတစ်ခုက ဒီလိုပါ
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ အစောပိုင်းတုန်းက
ချမ်းချမ်းရဲ့ ကဗျာတွေကို ၊ ဒီမန်းတလေးဂေဇက်ထဲမှာ တစ်ခြားတစ်ယောက် က ချမ်းချမ်း နာမည် ခရက်ဒစ်မပေးပဲ လာတင်တာကို မသိခဲ့တာလား ဆိုတာပါပဲ
ဂျပန်မှာနေတုံးက နာဂအိဆိုတဲ့ရပ်ကွက်ကမြန်မာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တာ ဒုစရိုက်မှူလဲများတယ် အနားကိုမကပ်ရဲဘူး ရထားပေါ်မှာဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အိတ်တွေ အလစ်သုတ်တာ ဆေးကြောင်ပြီးကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သတ်သေတာ ထိုင်ဝမ်မှာလဲရှိတယ် ဒါကြောင့်မို့ဝေးဝေး မှာဘဲနေတယ် ရိုးရိုးသားသား နဲ့ကြီးပွါးချမ်းသာတဲ့ မြန်မာပြန်တွေလဲရှိတယ် ဆရာဝန်တွေများပါ့ (ဒါပေမဲ့ အဲဒီလူတွေက ကျနော်ဒို့လို တရုတ်မျိုးဟေ့ဒို့ဘမာတွေ) ခိုးမစားဘူး ကြိုးစားတယ်
ပို့စ်ထဲက စာကြောင်း တစ်ချို့ကို …. ကန့်ကွက်ပါတယ် ။
အပြစ်ရှိသူကို ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ပေးတာ .. လူမျိုးတွေ ၊ ဘာသာတွေ ကိုင်စွဲစရာမလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ် .. ။
လူမျိုး၊ ဘာသာခွဲခြားပြီး ၊ အပြစ်ဒဏ်ဖုံးဖိတာ ၊ ပေါ့လျော့စွာ ကျခံစေတာတွေက .. မလုပ်သင့်မလုပ်အပ်တဲ့အပြုမူမျိုးတွေပါ ။ နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်သူတိုင်းက ၊ နိုင်ငံက ချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာပြီး ၊ အပြစ်ရှိသူသာ အပြစ်ဒဏ်အတိုင်း ကျခံစေသင့်ပါတယ် ။
အပြစ်လုပ်သူက ဘာလူမျိုး ၊ ဘာဘာသာဖြစ်ဖြစ် … သူလုပ်တဲ့ ပြစ်မှူက .. သူတဦးတစ်ယောက်တည်းပေါ်မှာပဲ မူတည်သင့်ပါတယ် ။ မလိုလားအပ်ပဲ .. ဘာသာတွေ ၊ လူမျိုးတွေ ရောသိမ်းတွဲမပြောသင့်ပါဘူး ။
အသိဥာဏ် နည်းတဲ့ အာဏာရှင် ဘုရင်စနစ်တွေတုန်းက ၊ မိသားစုလိုက် သုတ်သင်ခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ် …. ။ အပြစ်သားကို ကိုယ့်လူမျိုးမို့ … ၊ကိုယ့်ဘာသာတူမို့ .. ဖုံးဖိပေးထားမယ် .. ထိန်ဝှက်ပေးထားမယ်ဆို …ကိုယ့်လူမျိုးထဲ ၊ ကိုယ့်ဘာသာထဲ သူခိုး ၊ ကြမ်းပိုးတွေချည်း ပွားများစေတဲ့ တရားခံက … မိမိကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … ။
ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေဟာလေ ပြည်ပ ရောက်ရင် ဘာလုပ်လုပ် ဘယ်သူမှ မသိဘူးဆိုတဲ့ စိတ်သိပ်မွေးတတ်ကျတာ….. အကျင့်ပါနေလို့ပါဗျာ…..ခိခိ
ခင်ညားကြီး ကျုပ်ကို စောင်းမပြောနဲ့
ကျုပ် အွန်လိုင်းမှာ အာချောင်တာကလွဲလို့ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ဘူး
တကယ်ချစ်လို့ ပြန်သွားဒယ် .. နည်းနည်းတော့ မသွားမပေါ့ .. စားရိတ်လေ .. စားရိတ် ..